I-WOWOW Brush Gold Bathroom Faucet 4 inch Bathroom Sink Faucet 3 Hole RV Igumbi lokugezela ompompi beSink 2 Handle Vanity Faucet ne-Drain Assembly Centerset Lavatory Faucet 360-Degree Swivel Spout
Ikhaya / Amanzi okugeza / Ukuphathwa Kwamabili Okuthinta Ukugeza / I-WOWOW Brush Gold Bathroom Faucet 4 inch Bathroom Sink Faucet 3 Hole RV Igumbi lokugezela ompompi beSink 2 Handle Vanity Faucet ne-Drain Assembly Centerset Lavatory Faucet 360-Degree Swivel Spout
I-Retro & Simple Basin Faucet: Igolide, elifudumele nelikanokusho, likwenzele indlu yangasese enhle nenhle. Isiphetho sebhulashi singakusiza ukuthi umelane nokugqwala nokugqwala empilweni yansuku zonke.
Kulula ukusebenzisa: Ukuzungezisa okungu-360-degree, ukwakheka okuphezulu kwe-arc, kungakhuphula indawo yokuhlanza, kulethe lula kakhudlwana empilweni yakho yansuku zonke. Umpompi omanzi ophatha izinto ezimbili uvumela ukulawula kalula ukushisa nokushisa okubandayo
Ikhwalithi ephezulu ngentengo: Umlenze wethusi nokwakhiwa kuqinisekisa ukuqina nokuthembeka; Igobolondo le-disc ye-Ceramic engaconsi. Isiphetho sepompo yokugcoba eyenziwe nge-ABS aerator ingakusiza ukonga amanzi. (Le aerator ingathathwa yehliswe ngqo ngezandla ukuze uyihlanze)
Categories: Amanzi okugeza, Ukuphathwa Kwamabili Okuthinta Ukugeza Tags: Igolide elixubile, Bamba kabili